एक दिनमा कति पानी पिउनुपर्छ ? - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
‘धेरै पानी पिउनु पर्छ, दैनिक आठ ग्लास वा दुई लिटर त पिउनै पर्छ’, यस्ता सल्लाह सजिलै पाइन्छ।
जल नै जीवन हो।
पानी हाम्रो जीवनको लागि निकै अहम् हुन्छ। त्यसैले बढी भन्दा बढी पानी पिउनु पर्छ। तर, पानीलाई लिएर यस्तो सोचाइ सँधै थिइन।
विशेष गरि पश्चिमी देशहरूमा उन्नाइसौँ शताब्दीको सुरुवातसम्म पानी राम्रो मानिन्थेन। समाजका माथिल्ला तहले पानी पिउनुलाई गरिबी ठान्थे। सोच्थे की पानीले पेट भर्नु गरिबको काम हो। पानी पिउनु उनीहरूको शानको विरुद्धमा थियो।
तर, आज तिनै देशहरूका नागरिकहरू अधिक पानी पिउँदै छन्। अमेरिकामा झन् सोडा भन्दा बोतलको पानीको बिक्री बढी छ। नेपालमा पनि खुबै पानी पिउन थालियो।
नपिउनु पनि कसरी। दिन रात बढी भन्दा बढी पानी पिउने सल्लाह जो दिइँदै छ। अधिक पानी पिउँनु स्वस्थ शरीरको रहस्य, चम्किलो छालाको कारण बताइँदै छ। अनि धेरै पानी पिएर क्यान्सर र मोटोपनबाट छुटकारा पाउने
विषय पनि चर्चामा छ।
दिनमा ८ ग्लास अर्थात २४० मिलिलिटर पानी ८ ग्लास पिउनु पर्ने मानिसहरू बताउँछन्। तर, यो नियम आयो कहाँ बाट? यो सल्लाह कसले दियो ? किनकी यो कुनै खोज, अनुसन्धान वा वैज्ञानिकको दाबी पटक्कै होइन।
त्यसो भए मानिसहरू पानी बढी पिउनु पर्नेको फ्यान किन भए?
यसका केही पुराना कारण छन्ः
सन् १९४५ मा अमेरिकाको फूड एन्ड न्युट्रिशन बोर्ड अफ नेशनल रिसर्च काउन्सिलले हरेक क्यालोरी पचाउन वयस्कलाई एक मिलिलिटर पानी चाहिने सल्लाह दियो।
अर्थात यदि २ हजार क्यालोरी खानु हुन्छ भने २ लिटर पानी पिउनु पर्छ।
यसमा केवल सादा पानी मात्र होइन, बरु फलफूल अनि अन्य पेय पदार्थबाट पाइने पानी पनि सामेल छ। फलफूलमा ९८ प्रतिशतसम्म पानी हुनसक्छ।
साथै सन् १९७४ मा मार्गरेट म्याक्विलियम्स र फ्रेडरिक स्टेयरको किताब न्यूट्रिशन फर गुड हेल्थमा सिफारिस गरिएको थियो कि हरेक वयस्कले दिनमा ८ ग्लास पानी पिउनु पर्छ।
तर यी दुई लेखकले पनि यहि एक कुरा दोहोर्याएका थिए। यो ८ ग्लास पानीमा फलफूलवाला पानी मात्र होइन, सफ्ट ड्रिङ्क्स र बियरमा हुने पानी पनि सामेल थियो।
पानीको अति आवश्यक हो, यसमा कुनै दुईमत छैन। शरीरको कुल तौलको दुइ तिहाइ पानी हुन्छ। यसकै मद्दतले शरीरले पोषक तत्व पाउँछ। शरीरको विषाक्त बाहिर निकाल्न पानीले नै भूमिका खेल्छ। शरीरको तापक्रम नियमित गर्ने देखि, जोर्नीको मुलायामता कायम राख्ने पानीले गर्छ। शरीर भित्र हुने अधिकतम रासायनिक प्रतिक्रियाहरू पानी बिना सम्भव छैन।
यसको अलावा, पसिना, पिसाब र श्वासबाट हामीले पानी शरीरबाट बाहिर निकाल्छौ। त्यसैले यो जरुरी हुन्छ की शरीरमा आवश्यक पानीको मात्र कायम भइरहोस्। जब शरीरमा १-२ प्रतिशत पानी कम हुन्छ, हामी डिहाइड्रेसन अर्थात पानीको कमीको शिकार हुन्छौँ। अनि जबसम्म हामी जरुरी मात्रा पिउँदैनौं, हालत खराब हुँदै जान्छ। कुनै बेला त पानीको कमी घातक सिद्ध हुन पनि सक्दछ।
दैनिक ८ ग्लास पानी पिउने भ्रम पुरै दुनियाँमा छ। कयौं दशक देखि चलिरहेको सोच मान्ने हो भने हामी पानीको ठूलो कमीको शिकार भएका छौ। तर, हामीलाई पानी त्यति मात्र जरुरी छ, जति शरीरले माग्छ।
अमेरिकाका टफ्ट्स यूनिभर्सिटीका विशेषज्ञ इर्विन रोजेनबर्ग भन्छन् कि, ‘पानीको सन्तुलन कायम गर्न मानिसको शरीरले लाखौं वर्ष विकासको प्रक्रियाबाट गुज्रेर सिकेको छ। यसको सुरुवात तब देखि भएको थियो, जब समुद्रबाट पहिलो जीव जमिन बस्न आएको थियो। आज मानिसको शरीरमा पानीको सन्तुलन बनाउन निकै विकसित र कारगर प्रणाली छ।’
कुनै पनि स्वस्थ शरीरमा पानीको जरुरत हुनासाथ मस्तिष्कले थाहा पाउँछ। तब प्यास लागेको संकेत गर्छ। दिमागले अर्को एक हर्मोन निकाल्छ, जसले मृगौलालाई पिसाब गाढा बनाएर शरीरबाट निस्कने पानी बचाउन संकेत गर्छ।
बेलायतका डाक्टर एंव खेलाडीका सल्लाहकार कोर्टनी किप्स भन्छन, ‘यदि आफ्नो शरीरको कुरा सुन्नुहुन्छ भने यसले नै प्यास लागेको संकेत दिन्छ। मान्छे सोच्छन् कि प्यास लाग्नु भनेको शरीरमा पानीको कमी भएको धेरै समय भइसक्यो। गलत हो। हजारौं वर्ष देखि मान्छे यही संकेत पश्चात प्यास बुझाउँदै आएको छ। शरीरले पानीको कमीको गलत संकेत दिन्छ भनेर सोच्नु नै गलत हो।
प्यास लाग्दा पानी सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। किनकी यसमा क्यालोरी हुँदैन। तर हामी प्यास लाग्दा चिया, कफी, कोल्ड ड्रिङ्क्स वा अन्य पेय पदार्थ पिएर पनि पानीको कमी पुरा सक्छौ। क्याफिनबाट शरीर अन्य हानी त हुन्छ नै, तर पानीको जरुरत भने पुरा गर्छ।
वैज्ञानिकहरुले आजसम्म कुनै प्रमाण भेटेका छैनन् कि अधिक पानी पिउनु पर्छ, पिइरहनु पर्छ।
जब प्यास महसुस हुन्छ, तब पानी पिउनुस्।
तर अलिक बढी पानी पिउनु कुनै नोक्सान चाहिँ हुदैन। यसले डिहाइड्रेसन अर्थात पानीको कमी हुनबाट बचाउँछ। दिमागलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। पर्याप्त मात्रामा पानी शरीरमा कायमा हुँदा स्वास्थ्य सम्बन्धि धेरै समस्या हल हुन्छन्।
शरीरमा पानीको मात्रा कमी हुनु पटक्कै स्वस्थकर होइन तर, धेरै पानी पिएर छाला स्वस्थ हुने बारे पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण भेटिएको छैन।
Nextआलिया र रणवीरको विवाहको बीचमा आए सलमान